Madaxweyne Farmaajo oo markale codsaday in la joojiyo dagaalka Tukaraq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne Farmaajo oo markale codsaday in la joojiyo dagaalka Tukaraq
May 25, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia, Somaliland 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku celiyay in la joojiyo dagaalka Tukaraq.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta oo Jimce ah ka hadlayay masjid kuyaala Muqdisho ayaa yiri: “Waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo dadka Soomaaliyeed ee dhiigga ku daadinaya Tukaraq,”
“Waxaan leeyahay xabad joojin deg-deg ah hala sameeyo, dhiiga daadanayana hala baajiyo, waxa dhimanaayo waa wiilal Soomaaliyeed.” Ayuu ku sii daray.
Xaalada Tukaraq ayaa deganayd maanta oo Jimce ah, balse ciidamada labada dhinac ayaa weli halkaas isku hor fadhiya, taasoo keeni karta in wakhti kasta uu dagaal ka dhex qarxi karo.
Waa markii labaad oo Farmaajo uu codsado in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland.
Dhanka kale, xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa bayaan wadajir ah oo ay soo saareen ugu yeeray labada dhinac ee dagaalamaya in ay joojiyaan dagaalka.